यो वीर घटनाहरू र unsolved रहस्यहरुलाई भरिएको छ किनभने प्राचीन इतिहास सधैं धेरै मानिसहरू आकर्षित गरेको छ। प्राचीन परम्परा मानव जीवनको धेरै क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित गर्दै छन्, र तिनीहरूले पनि फैशन प्रभावित छन्। पुरातन मिश्र, ग्रीस र रोममा, मान्छे आभूषण थकित छन्। तथापि, प्रायजसो, तिनीहरूले दुष्टात्मा विरुद्ध amulets र talismans रूपमा सेवा गरे। र हाम्रो समय मा हामी एक एकदम ठूलो लोकप्रिय आभूषण ग्रीक र मिश्री शैली बनेको प्राप्त गरेको छ। यो आभूषण र पोशाक आभूषण रूपमा हुन सक्छ।
प्राचीन मिश्रमा के गहने गरियो?
पुरातन मिश्री आभूषण पहिलो यी उत्पादनहरु सिर्जना गर्दा, मान्छे अझै धातु mined छैन समयमा रूपमा, सिङ वा पत्थर देखि गरे। पछि तिनीहरूले सुन, चाँदी, र कांस्य र तामा को Jewels उत्पादन गर्न थाले।
राज्य को कालिगढहरु मिश्रको आभूषण प्राचीन संसारको धेरै देशहरूमा निर्यात र अत्यधिक सराहना कि समयमा यस्तो उत्कृष्ट र अद्वितीय डिजाइन उत्पादन।
महिला र पुरुष दुवै द्वारा पहना talismans रूपमा प्राचीन मिश्र आभूषण को समयमा। धेरै आभूषण सहित जीवनमा प्रयोग गरिन्छ जो आफ्नो मान, साथ सँगै गाडे थिए।
विशेष गरी ती दिनमा साधारण को मुहर-घन्टी, व्यापक कंगन र पेंडेंट, हार, झुम्का र पेंडेंट थिए। कंगन हातमा मा, तर पनि गोलीगाँठो मात्र छैन पहना। पनि लोकप्रिय मिश्रको थियो घाँटी, मा सजावट पनि काँध र छाती घेर्नु सक्छ जो। यो उत्पादन एक "pectoral" भनिन्छ। दन्त्यकथा अनुसार, यो आत्मा हो जो हृदय, रक्षा गर्न अभिप्रेरित थियो। अक्सर जीवन र शक्ति embody कि हृदय को चित्रण गर्ने प्रतीक, साथै अन्य वर्ण pectoral। साथै, महान जन्म मान्छे रत्नहरू र नाजुक ढाँचाको संग सजाया tiaras लगाउँथे।
आभूषण मा पत्थर को प्रयोग
मिश्रको सजावट अक्सर सबै भन्दा साधारण जो फिरोजा थिए रत्नहरू, गोमेद, lapis lazuli, नीलम, आपल, गारनेट संग सजाया थिए। यी खनिज पनि अक्सर महंगा लुगा, बेल्ट र अन्य उत्पादनहरु को सजावट मा उपस्थित छन्। कृपा र रातो पत्थर - - शक्ति फिरोजा आनन्द, lapis lazuli प्रतिनिधित्व गर्छ।
प्राचीन मिश्र मा सबै भन्दा साधारण प्रतीक udzhat, एक लम्बी आँखा प्रतिनिधित्व थियो जो थियो। यो सुरक्षा र निको सङ्केत। यो अक्सर मृतक को प्राण रक्षा गर्न tombs मा चित्रित छ।
Ankh - अनन्त जीवनको प्रतीक। माथि घन्टी एक क्रस को रूप मा चित्रण गरिएको। यो साइन धेरै, आधुनिक समयमा लोकप्रिय अक्सर यो एक लटकन रूपमा प्रयोग गरिन्छ छ।
Chenois नाम लेखिएको छ जो भित्र grommet प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्राचीन मिश्रमा, यो यस्तो जन्तरको जसको नाम मा कुँदिएको एक मानिस, जीवन prolongs, र यो misfortunes देखि सुरक्षा विश्वास थियो।
मिश्री प्रतीकात्मक रूप मा बिरुवाहरु
लोटस फूल - प्राचीन मिश्र को सबै भन्दा साधारण प्रतीक को एक। यो बोट एक पुनरुद्धार, सिर्जना र सूर्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। पौराणिक कथाहरु को अनुसार, सूर्य एक विशाल देखि आकाश मा देखा लोटस फूल, सागर देखि देखा जो। मिश्रको आभूषण अक्सर यो बोट को रूप मा तत्व समावेश गरिएको छ।
पुरातन मिश्री प्रतीकात्मक रूप मा जनावर को तस्बिरहरू
सबै भन्दा साधारण प्रतीक हो कीरा scarab। उहाँले सूर्य को Rising र प्राण को rebirth सँग सम्बन्धित थियो। यो कीरा अक्सर चित्रण गरिएको छ। धेरै मिश्रको सजावट बग को रूप मा एक आभूषण गरिएका थिए। पनि scarab छवि अक्सर tombs प्रयोग र एक मृतक व्यक्ति को प्राण को rebirth प्रतीकको रूपमा सेवा गरे।
दुई crows - यो प्रतीक एक मानिस र एक महिला बीच विवाह हो।
सर्प को पुच्छर शरीर बाँकी संग लुकाएको थियो। प्राचीन मिश्रमा, यो युनानी "basilisk" यो चरित्र भनिन्छ, अनन्त साइन रूपमा चित्रण गरिएको थियो। मिश्रीहरूले आफूलाई एक सर्प "Ouarion" भनिन्छ।
हक। यो चरा प्राण प्रतिनिधित्व गर्छ। यसलाई "प्राण" र "हृदय" को अवधारणा जोडती एक शब्द छ जो इजिप्सियन उनको नाम, देखि स्पष्ट थियो - त्यसपछि यो मानव प्राण हृदयले ठीक छ कि विश्वास थियो।
शक्ति एक प्रतीक तल कटा को छडी, कुकुर टाउको देखाएर शीर्ष छ। तिनीहरूले फिरऊनको स्वामित्व रूपमा यो जस्तै देखिन्छ कि Scepter, देवहरूको को हातमा चित्रण गरिएको।
हाम्रो समय मा मिश्री शैलीमा सजावट
आजको विश्व धेरै प्राचीन आभूषण Gaze संग्रहालय आगंतुकों मा। धेरै निर्माताहरु मिश्री शैली मा एक सुरुचिपूर्ण सजावट सिर्जना गर्ने, पुरातन मालिकको को सजावट को शैली अनुकरण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
आजकल, तपाईं आभूषण वा आभूषण, माथि सूचीबद्ध गरिएका ती पुरातन प्रतीक को कुनै पनि सजिएको छ जो पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं शायद यो धेरै पटक देखेको छु जो इजिप्सियन आभूषण, फोटो, यो धेरै लोकप्रिय छ। यी मूल सामान पनि सबैभन्दा परिष्कृत तरिका पूरक हुनेछ देखि यो, अचम्मको छैन।
अब पनि साधारण उत्पादनहरु archaeologists फेला उत्खनन समयमा प्राचीन आभूषण को प्रतिकृतिहरु छन्।
मिश्री शैली मा सबै भन्दा लोकप्रिय आभूषण को एक अनमोल समावेश गर्ने एक कंगन छ गोमेद,: पत्थर lapis lazuli, फिरोजा, र अन्य। तपाईं मिश्रको हुन भयो भने, त्यसपछि यात्राको एउटा सम्झाउने रूपमा, तपाईंले आफ्नो सुरुचिपूर्ण स्टाइलिश छवि पूरक भन्ने सहायक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर, त्यो तपाईं सस्तो खर्च गर्न असम्भाव्य छ।
चाँदी को नमूनाहरू के हुन्? चाँदी नमूनाहरू विवरण
हीरे रंग: इतिहास र शिक्षा को विशेषताहरु
र तपाईं जान्दछन्, पुखराज - बहुमूल्य वा अर्ध-अनमोल पत्थर?
चाँदी पुरुष कंगन। उपहार सुझाव
दुबई गोल्ड आभूषण: सुविधाहरू, मूल्यहरू समीक्षा
प्राकृतिक चयन। भौतिक चयन। भौतिक चयन को मूल सिद्धान्तहरूले
"हीरा Uvildy" (मनोरञ्जन केन्द्र): वर्णन, मूल्यहरू, समीक्षा
कसरी घर को भित्री मा इन्डोर बिरुवाहरु व्यवस्था गर्न
आय को प्रमाणपत्र बिना क्रेडिट कार्ड कसरी उपभोक्ता क्रेडिट बनाउन
Selfie सर्वश्रेष्ठ लागि कुन फोन?
स्वचालित कफी मिसिन: ब्रान्ड, वर्णन को विकल्प, समीक्षा
चीन मा छुट्टी।
मौसम को एक प्रवृत्ति - टस्क्यानी देखि Sheepskin
कसरी चयन र स्केट्स लगाउन।